I-Studio enkabeni ye-Ballons Regional Park - I-Airbnb
I-Studio enkabeni ye-Ballons Regional Park
Hohrod, Grand Est, i-France
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Michelle Et Guy
U-Michelle Et Guy Ungumbungazi ovelele
I-studio kanye ne-balcony yakhona ibheke isigodi sase-Munster, uzokujabulela ukubuka okuyingqayizivele kanye nokuma okuseningizimu. Ekuphakameni okungama-800 m, iyindawo ekahle yokuqala yokuhamba ngezinyawo okuthambile noma ukugibela izintaba okunemidlalo eminingi ezintabeni. Sizokuqondisa ekukhetheni kwakho ukuhamba nokuvakasha kwe-Alsace kanye neVosges.
Izithombe zibonisa isitudiyo esingu-30 m² esifakwe ngendlela esesitayeleni nesebenzayo ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise. Abangane bethu abayizilwane abamukelwa
Enkabeni yeParc des Ballons des Vosges, isitudiyo siyindawo ekahle yokuqala yokuvakasha nokuvakasha okuningi, kungaba ezintabeni zaseVosges, noma ezivinini nasethafeni lase-Alsace.
Iziza zemvelo, amatshe ezikhumbuzo nezinsalela zomlando, iminyuziyamu, amadolobhana avamile namadolobhana konke kuyizindawo ezijabulisayo lapho uhlala khona.
Amamephu, amathrekhi e-GPS nezincwadi onawo. Ku-smartphone yakho ungalanda uhlelo lwe-Openrunner, bese kuthebhu ethi "Sesha" faka igama elingukhiye elithi "4saisonshoh"
I-chalet des Quatre Saisons itholakala edolobhaneni lase-Hohrodberg esigodini sase-Munster enhliziyweni ye-Regional Park ye-Ballons des Vosges. Ngenxa yokuphakama kwayo okungu-800 m, ibusa idolobha laseMunster futhi inikeza umbono we-180 °: Ihlathi Elimnyama (eJalimane) empumalanga, iBernese Alps ngosuku olucwathile, bese kuthi iziqongo zeVosges - Grand and Petit Ballon, Hohneck , uThandeka...
Izindlela zokuhamba ezimakiwe ziyafinyeleleka esitudiyo futhi zingenziwa ngezinyawo, ngebhayisikili lezintaba noma ngezicathulo zeqhwa ebusika. Umgibeli wamabhayisikili emgwaqeni uzothola amasekhethi awo wonke amazinga nxazonke.
Ibungazwe ngu-Michelle Et Guy
Indawo ilungele ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni noma ukuhamba ngebhayisikili emgwaqeni, njengoba mina ngingudokotela, ngeke ngihluleke ukukuqondisa ezinqumweni zakho. Ebusika, izindawo zokungcebeleka eqhweni eziningana zinikela ngemithambeka yawo wonke amazinga okushushuluza ekwehleni, kanye nemisebenzi ye-Nordic (i-snowshoe, ukushushuluza eqhweni, ukushushuluza). Batholakala cishe imizuzu engamashumi amabili ukusuka studio.
Indawo ilungele ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni noma ukuhamba ngebhayisikili emgwaqeni, njengoba mina ngingudokotela, ngeke ngi…
UMichelle Et Guy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Hohrod namaphethelo